शिक्षा व्यवस्था र अधिकार | USAHello | USAHello
शिक्षा व्यवस्था र अधिकार
तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा बच्चाहरु र आफ्नो शिक्षा अधिकार लागि शिक्षा व्यवस्था थाह? शिक्षा व्यवस्था सबैलाई निःशुल्क शिक्षा एउटा सही छ भन्छन्. विद्यार्थी एक hijab लगाउने र प्रार्थना गर्ने अधिकार छ. तपाईं आफ्नो छोराछोरीको स्कूल कुरा गर्दा तपाईं व्याख्याकारों एउटा सही छ. आफ्नो शिक्षा अधिकार बारे जान्न.
स्कूल जान आफ्नो दायाँ
संयुक्त राज्य अमेरिका मा हरेक राज्य मा, छोराछोरीलाई शिक्षा एउटा सही छ. तपाईं एक नागरिक वा कानुनी आप्रवासी हुन आवश्यक छैन. वास्तबमा, हरेक राज्य मा शिक्षा व्यवस्था सबै बच्चाहरु भन्छन् पर्छ स्कूल वर्ष को एक निश्चित संख्या लागि जाने.
उमेर बच्चाहरु सुरु हुनुपर्छ स्कूल बीच छ5र 8 राज्य मा वर्षको आधारमा. तिनीहरू सम्म तिनीहरूले स्कूलमा बस्नु पर्छ 16, 17, वा 18 वर्ष पूरानो, पनि बस्ने जो राज्य आधारमा.
हरेक समुदाय मुक्त छन् भनेर सबै उमेरका लागि सार्वजनिक विद्यालय छ, सामान्यतया को उमेर देखि5वर्ष पूरानो, तर केही राज्य अमेरिका मा यो छ4वा6वर्ष पूरानो.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा बच्चाहरु पर्छ तिनीहरूले कम्तीमा छन् सम्म विद्यालयमा रहन 16, तर तिनीहरूले एक छ दायाँ अब को लागि स्कूलमा रहन. यदि विद्यार्थीहरूले मा उच्च विद्यालय देखि स्नातक गर्न तयार छैनन् 18, तिनीहरूले रहन वा कम से कम हो सम्म भर्ना गर्न एक अधिकार छ 20 वा 21 वर्ष पूरानो. केही राज्य अमेरिका मा, कुनै उमेर सीमा छ. तिमी सक्छौ अंग्रेजी मा पढ्न र आप्रवासी विद्यार्थी बारे स्पेनिश’ संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्कूल धाउन अधिकार. तपाईं पनि गर्न सक्छन् आफ्नो राज्य मा स्कूल सुरु उमेर र उमेर सीमा हेर्न.
दुर्भाग्यवश, केही पुराना विद्यार्थी रहन वा स्कूलमा भर्ना गर्ने अधिकार अस्वीकार गरिएको छ. तिनीहरूले एक उच्च विद्यालय उपाधि प्राप्त गर्न वयस्क शिक्षा कक्षाहरू जान आवश्यक भनिएको छ.
तपाईं उच्च विद्यालय पहुँच छैन भने, तपाईं एक GED लागि अनलाइन अध्ययन गर्न सक्छौं®, HiSET वा TASC संग प्रमाणपत्र हाम्रो निःशुल्क अनलाइन GED® तयारी कक्षा. को GED®, HiSET र TASC प्रमाणपत्रहरू उच्च विद्यालय डिप्लोमा सट्टा छन्. तिनीहरूले तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा उच्च विद्यालय स्नातक गर्ने कसैले जस्तै ज्ञान छ कि कलेज र हाकिमहरूले देखाउन.
शिक्षा व्यवस्था र मुसलमान अमेरिका लागि अधिकार
केही मुसलमान अमेरिकी विद्यार्थीहरूले स्कूलमा विरुद्ध discriminated महसुस. तपाईं मुसलमान छन् भने, तपाईं आफ्नो अधिकार थाहा हुनुपर्छ. जस्तै, तपाईं सार्वजनिक स्कूलमा आफ्नो hijab वा kufi लगाउने अधिकार छ, भने पनि त्यहाँ पोशाक कोड छ. तपाईं प्रार्थना गर्न अनुमति, र तपाईं धार्मिक बिदाको लागि विद्यालय सम्झना गर्न सक्छ.
CAIR: मुसलमान युवा लागि स्कूलमा आफ्नो अधिकार थाहा
CAIR नागरिक रूपमा आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी बारे अमेरिकी मुस्लिम सिकाउँछ र तिनीहरूलाई नागरिक जीवन को सबै पक्षमा भाग लिन मद्दत गर्छ. यो पृष्ठमा जानकारी जवान मुसलमान अमेरिकी गर्न बताउँछन् आफ्नो अधिकार स्कूलमा के हुन्.
नोट: को CAIR पृष्ठमा डाउनलोड बटन काम गर्दैन. तर तपाईं डाउनलोड हाम्रो वेबसाइट बाट खल्ती पुस्तिका to save or print.
शिक्षा व्यवस्था र newcomers लागि अधिकार
को ACLU भन्छन्, “यो अंग्रेजी बोल्न र तपाईं सिक्ने बेला अन्य विषयहरुमा एक राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न सिकाउन सार्वजनिक विद्यालय को काम छ. अंग्रेजी बोल्न नगर्ने विद्यार्थी द्विभाषी र शिक्षा वा अंग्रेजी भाषा निर्देशन वा दुवै तिनीहरूलाई प्रदान गर्न स्कूल जिल्ला आवश्यकता सही छ।”
न्याय र शिक्षा को अमेरिकी विभागहरू:
गैर-अंग्रेजी वक्ता लागि विद्यालय अधिकार बारे जानकारी
यो सरकार जानकारी आमाबाबुले लागि हो, विद्यार्थी, र विद्यालय परिवार को अधिकार बुझ्न आवश्यक जो जो बोल्दिन, सुन्न, पढ्न, वा अंग्रेजी आफ्नो पहिलो भाषाको रूपमा लेख्न.
यो जानकारी धेरै भाषामा छ. जब तपाईं तल आफ्नो भाषा चयन, लिङ्क अर्को विन्डो खुल्नेछ. तिनीहरूले PDF कागजात छन्, त्यसैले तपाईं राख्न वा मुद्रण गर्न डाउनलोड गर्न सक्छन्:
को GED बारेमा जान्न®, HiSET र TASC परीक्षण